Arag oo u beddel faylasha dwg noocyada kala duwan ee AutoCAD - Geofumadas
Maarso, 2013 AutoCAD-AutoDesk
Guud ahaan, markay noo soo diraan feylka 'dwg' waxaa inta badan dhibaato ka dhasha nooca ay ku badbaadeen. Waa kuwan qaar ka mid ah siyaabaha loo xalliyo dhibaatada:
Waa maxay nooca dwg
Tani suurtagal maaha in la aqoonsado, maadaama faylka uu leeyahay mid fudud.Dwg ama .dxf laakiin ma naqaano ilaa aan isku dayno inaan furo.
Sidaas daraadeed waa lagama maarmaan in la fahmo in sanad walba jiro cusub version of AutoCAD, inkasta oo ayna sanad walba lahayn nooc file cusub ah. Jadwalka soo socdaa wuxuu muujinayaa noocyada AutoCAD ee aad u badan tahay inaad ka heli karto faylal halkaas, sanadka la sii daayo iyo haddii uu lahaa nooc cusub.
Magaca rasmiga ah Sannad-bixinta comments
AutoCAD 1.0 version ilaa AutoCAD 14 1981 ilaa 1997 Nooc kasta wuxuu lahaa qaab cusub oo dwg file
AutoCAD 2000 1999 Sannadkan waxaan soo bandhignay habka dwg 2000, oo wali loo isticmaalo qalabka GIS (gvSIG, Manifold GIS, Quantum GIS, waa tusaalooyin barnaamijyo)
AutoCAD 2004 2003 Hordhaca qaabka 2004 DWG
AutoCAD 2007 2006 Soo bandhigida qaabka dwg ee 2007
AutoCAD 2010 2009 Soo bandhigida qaabka dwg ee 2010
AutoCAD 2011 ee Mac 2010 Nooca koowaad ee Mac ka soo AutoCAD version 12
AutoCAD 2013 2012 Hordhaca qaabka 2013 DWG
AutoCAD 2014 2013 Waxaa la sii deyn doonaa Abriil ee 2013, wuxuu isticmaalaa qaab isku mid ah ee hore u ahaa.
Haddii aad codsaneysid feyl, waa inaad codsataa inay keydiyaan, sidaas darteed, nuqul hore, oo aan dammaanad ka qaadayno inaan akhrin karno. Arrintaas, haddii aan haysanno AutoCAD 2011, waxaan dib u akhrin karnaa noocyada 2010 dwg gadaal; laakiin maahan noocyada 2012. Waxaad sidoo kale u habeyn kartaa AutoCAD si aad ugu keydiso nooc hore, adigu markii hore.
Sida loo eego oo loo rogo faylasha dwg si ay u noqoto mid kale
Laga soo bilaabo 2005 AutoDesk wuxuu barnaamijka DWG TrueView ku bilaabay barnaamijka, sidoo kale marka lagu daro in uu arko faylasha ka duwan noocyada kala duwan sida TrueConvert waxaad ka dhigi kartaa isbeddel noocyo kala duwan oo aan daneyneyno.
Waa wax aan fiicneyn, in barnaamijku bilawdo rakibidda adoon sameeynin dib-u-eegid shuruuda ah illaa iyo xilliga uu jiro jawiga deegaanka NET 4.
Sidaas darteed uma baahnid inaad bilowdo rakibidda adiga oo aan marka hore kobciyo tan. Tani waa inaad u tagtaa xiriirka:
Ka taxaddar in barnaamijku ku weydiiyo in la xiro barnaamijyada Microsoft ee la adeegsanayo, sida biraawsarka. Waa suurtagal in la muujiyo inaan la sameyn tan.
Marka aad tan sidaan sameyso, si aad u soo dejiso barnaamijka TrueView ee aad u baahan tahay inaad tagto xiriirkaan:
Waa inaad soo dejiso adeegga, kadibna dooro nooca (32 ama 64) iyo luqadda.
Waana taas. Inta soo hartay waa in la barto xeeladaha barnaamijka lagana faa'iideysto.
Marka faylka la furo, xulashada beddelka DWG ayaa sameeya inta kale. Nooca ayaa la xushay waxaana jira hab lagu doorto xulashooyinka aasaasiga ah sida nidaamka nadiifinta heerarka / qaababka aan la adeegsan ama dib u dejinta goobaha daabacaadda.
Dabcan, waxaad sidoo kale bedeli kartaa faylasha kala duwan ee block.
Post Previous" Hore 3 Majalado iyo 5 waayo-aragnimo oo ku saabsan geomatis
Post Next Wattio: Isticmaalka sirta korontada ee gurigaNext »
5 Jawaab ah "Arag oo u beddel faylasha dwg noocyada kala duwan ee AutoCAD"
Jean-Paul Joannet isagu wuxuu leeyahay:
Jaangoynta à la soo bandhigto:
Il n'y waa suurtogalnimada aucune ee beddelka Autocad 14
jose alfonso ramos xagasha isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u arkaa inay aad waxtar u leedahay fududeynta shaqada
Facundo Cabrera isagu wuxuu leeyahay:
Waxay i badbaadiyeen dhowr maalmood oo shaqo ah. Waxay u shaqaysay si fiican. Waxa kaliya ee aan bedelay waa nooca deegaanka NET. Hadda waxaa lagaa doonayaa in laguu soo diro version .NET 4.5. Ka eeg xiriirka microsoft iyo raac tallaabooyinka.
Francisco Rojas isagu wuxuu leeyahay:
Tani waxay ka timid nuqulkii ugu dambeeyey ee fiilo-geliyayaashii hore sida 2010, wuxuu u shaqeeyaa si fiican, adigoo u mahadcelinaya qalabkani, kaas oo naga dhigaya in aan nadiifineyno nuqul oo aan rakibno
Emi isagu wuxuu leeyahay:
Hello, mahadsanid boostada, laakiin waxaan kuu sheegayaa in aan sameeyey tallaabooyinka oo dhan iyo markii aan gujiyo on setup ayaa sheegay in Setup Initialization oo halkaas joogaya! kama dhammaystirin bilawga la fulin karo, miyaad haysaa fikrad ah sababta ay tani u dhici karto?